Edere site Tranquillus | Feb 9, 2021 | Na weebụ
Site na ọzụzụ na IFOCOP, ọ bụghị naanị Johanna nwetara nka dị mkpa maka ọrụ ọhụụ ya, onye enyemaka ahịa, mana ọ (na karịa ihe niile) nwetara obere ihe ọ na-enweghị ka ọ ghọta nrọ ya nke ịrụ ọrụ dịka onwe ya: inwe ntụkwasị obi na ya onwe ya na ikike ya ịmalite. Nzukọ na otu nwa agbọghọ na TAQUET!
Ọ dị nso na Val d'Oise (95) anyị na-achọta taa Johanna, nwa agbọghọ dị ike nke 32 afọ, gafere IFOCOP, oge nke ọzụzụ otu afọ na usoro nke mgbanwe. Kemgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Ọzụzụ Ndị Nleba Azụmaahịa, ọ nwere obi a toụrị na ọ banyela n'okporo ụzọ nke nyochagharị ọkachamara nke ga-enye ya ohere, n'afọ a, ịmalite ọrụ ahụ nke dinara n'isi ya ọtụtụ afọ. Ugbua: ịbụ onye isi nke gị ekele na-emesapụ aka mmega.
Mana ka anyị bido site na mbido. Na mbụ na-arụ ọrụ n'ọhịa nke aesthetics, yana nwee ndabere dị ka ihe egwuregwu maka ụmụaka, Johanna amụbaala ahụmịhe ma mee otu nkwubi okwu ahụ oge ọ bụla: mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mgbanwe, bụ ihe dị mkpa nke mmepe ọkachamara ya. Ma ọ ka ga-achọta ebe ọ ga-eche ...
Onye na - azụ ahịa: ọzụzụ na - enye gị nku July 10th, 2021Tranquillus
GỤỌ Ụmụ akwụkwọ Dyslexic nọ n'ụlọ nzukọ nkuzi m: nghọta na inye aka
gara agaNa nkịtị nke nkwekọrịta mkpokọta, ndị nnọchi anya ahịa a na-erite uru na ụgwọ a na-akwụ ụgwọ?
-esonụOmume na-adighi anya: yigharia nke otu ugwo nke enyere ndi mmadu aka
Ndị ọrụ nọ na ezumike njem njem nwere ike irite uru na atụmatụ Mgbanwe mkpokọta